Khasaaraha Shacabka Gobolka Sitti Kasoo Gaadhay Weerarrada Canfarta Iyo Xaqiijinta Guddoomiye Maydhane - Jigjiga Online
HomeSomalidaKhasaaraha Shacabka Gobolka Sitti Kasoo Gaadhay Weerarrada Canfarta Iyo Xaqiijinta Guddoomiye Maydhane
Dire Dhaba (JigjigaOnline) – Shacabka Dawladda Deegaanka Soomaalida, ayaa waxa si rasmi ah ay u heleen khasaaraha walaalahooda Gobolka Sitti kasoo gaadhay duullaanka ay ku hayaan ciidamada Liyuu Booliska Canfarta iyo Maleeshiyaad hubaysan, kuwaas oo dad badan ku laayey dhawr degmo.
Tirada illaa hadda dhimashooda la xaqiijiyey ee Shacabka Gobolka Sitti ayaa maraysa 273 qof oo rayid ah oo ay si arxan darro ah u laayeen Canfartu, waxaana intaas ka badan dhaawaca oo ay ku jiraan kuwo badan oo halis ah.
Dadka dhaawacmay ayaa waxay tiradoodu tahay 313 qof, hase yeeshee waxa kale oo barbar-socda khasaare kale oo hantiyeed oo iskugu jira dhac xoolo nool iyo guryo la gubay.
Xoolaha ay ciidamada Liyuu Booliska Canfartu dhaceen ayaa waxay tiradoodu ka badan tahay 5,500 neef oo iskugu jira Geel, Lo’ iyo Adhi, hase yeeshee waxa garab socday 250 guri oo ay lahaayeen dad shacab ah oo iyagana dab la qabadsiiyey.
Guddoomiyaha Gobolka Sitti, Cumar Cabdi Maydhane oo warbaaahinta la hadlay ayaa waxa uu xaqiijiyey khasaaraha illaa hadda ay diiwaangeliyeen ee Canfartu ay u geysteen shacabka aan hubaysnayn ee Sitti, waxaanu yidhi: “Waxa muddadaas ay dhibaatada ku hayeen galbeedka Sitti ku naf waayey 273 qof oo isugu jira hooyooyin, dad waayeel ah iyo carruur, halka dhaawacuna marayo 313 qof. Waxa kale oo weerarrada Canfarta lagu waayey xoolo dhan 5,000 neef, waxaana lagu gubay 250 guri oo ay shacabku lahaayeen.”
Khasaaraha Dhimashada iyo dhaawaca ee shacabka Sitti kasoo gaadhay weerarrada Canfarta
Guddoomiye Maydhane, waxa kale oo uu maamulka Canfarta ku eedeeyey inay yihiin dad aan damiir lahayn oo kasoo horjeeda isbeddelka waddanka ka dhacay, waxaanu yidhi: “Waxa maamulka Canfarta hoggaaminaya hadda, dad ma naxayaal ah oo aan doonaynin darisnimada iyo walaalnimada midna. Waxa maamulkaas ku jira dad kasoo horjeeda isbeddelka waddanka ka dhacay oo raba in arrinkaasi dhicisoobo.”
Warbaahinta Itoobiya qaarkeed, ayaa waxay toddobaadkan sheegtay in maleeshiyo kasoo tallaabay Djibouti ay dad ka laayeen, laakiin Guddoomiye Maydhane ayaa waxa uu arrintaas ku tilmaamay marmarsiiyo, waxaanu yidhi: “Waa marmarsiiyo sheegashada Canfarta ee ah in Al-shabaab, Djibouti iyo Somaliya ay soo weerareen, waaana hadal meel waayey oo aanay waxba ka jirin. Diyaar baanu u nahay inaanu difaacno dadkayaga iyo dalkayagaba.”
Tirada xoolaha laga dhacay Shacabka Sitti iyo Guryaha laga gubay
Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar oo toddobaadkan ka hadlayey madal lagu dhagax dhigayey Jid laami ah oo isku xidhi doona Magaalada Jigjiga iyo Qabalaha Dambal ee gobolka Sitti, ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddu ay kaalinteeda ka qaadanayso difaaca shacabka Sitti.
“Dhamaanteen aynu u ducayno shacabka Gobolka Sitti oo ay weerarro ba’an ku socdaan oo u baahan inaynu hiil la garab istaago, isku duubni iyo Soomaalinimo hala muujiyo, xukuumadduna kaalinteedii way kasoo baxaysaa, way waddaa, haddana way ku jirtaa.” Ayuu yidhi Madaxweyne Mustafe oo shacabkana ka dalbaday inay geestooda hiil u muujiyeen reer Sitti.